Izinkampani Ezihambisayo eNew York City, eNew York
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Izinkampani Ezihambayo I-New York New York City
Ukuthuthela eMiami Sisuka eNew York
Thola isilinganiso sakho sokuhamba esenziwe ngokwezifiso kuhambo lwakho olude lwebanga elilandelayo nokuphuma kwesimo kusuka eNew York City, eBronx, eQueens, eBrooklyn, eStaten Island, noma emadolobheni azungezayo ukuya noma kuphi e-US. Ukuhamba ibanga elide kwenziwa kube lula nge-All Around Moving Services Company. Okukhulu noma okuncane, sikwenza konke. Sishayele ucingo ...
buka Izinkampani Ezihambayo eshicilelwe 1 unyaka edlule
I-Capital City Movers NYC
"I-Capital City Movers NYC - Enye yezinkampani ezihamba kancane ezingabizi kakhulu zokuhlala nezentengiselwano i-NYC inikezela ngolwazi lwethu olusivumelayo ukusho ukuthi sinikezela ngezinsizakalo ezihamba phambili phakathi kwazo zonke izinkampani ezihamba ngezentengiselwano ze-NYC. Singasho lokhu, uma sithi thola amakhasimende amasha ngo ...
A inkampani ehambayo, i-ukususa noma i-van line yinkampani esiza abantu namabhizinisi ukuhambisa izimpahla zabo endaweni eyodwa kuya kwenye. Inikeza zonke izinsizakalo ezibandakanya konke zokuhambisa kabusha njengokupakisha, ukulayisha, ukuhamba, ukulayisha, ukuvula, ukuhlela izinto ezizogudluzwa. Izinsizakalo ezingeziwe zingafaka izinsizakalo zokuhlanza izindlu, amahhovisi noma izindawo zokugcina impahla.
Idolobha laseNew York, ngokuvamile elibizwa ngokuthi yiNew York City (NYC) noma nje iNew York (NY), lomuzi onabantu abaningi kakhulu e-United States. Njengoba kunesilinganiso se-2018 sabantu abalinganiselwa ku-8,398,748 abasatshalaliswa endaweni engaba amamayela-skwele angama-302.6 (784 km2), iNew York nayo iyidolobha elikhulu kunawo wonke labantu eMelika. Itholakala empumalanga eseningizimu yesifundazwe saseNew York, leli dolobha liyisikhungo sendawo yedolobha laseNew York, indawo enkulu yedolobha elikhulu emhlabeni ngabakwa-zasemadolobheni kanye nenye yezindawo ezinabantu abaningi emhlabeni, ezinabantu abalinganiselwa i19,979,477 I-2018 Metropolitan Statistical Area kanye nabahlali be22,679,948 endaweni yayo Ehlanganisiwe Yesibalo. Idolobha elinamandla emhlabeni jikelele, iNew York City ichazwe njengedolobha lezamasiko, elezezimali kanye nabezindaba, futhi linomthelela omkhulu kwezentengiselwano, ezokuzijabulisa, ezocwaningo, ezobuchwepheshe, ezemfundo, ezepolitiki, ezokuvakasha, ubuciko, imfashini nezemidlalo . Ijubane elikhulu ledolobha seligqugquzele igama elithi umzuzu waseNew York. Ikhaya lasendlunkulu yeNhlangano Yezizwe, iNew York iyisikhungo esibalulekile samazwe aphesheya kwezilwandle, eselinye lamatheku amakhulu emvelo emhlabeni, iNew York City inezigodi ezinhlanu, ngasinye sazo singumbuso ohlukile weSifundazwe saseNew York. . Lezi zigodi ezinhlanu - iBrooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx, neStaten Island - zahlanganiswa zaba yidolobha elilodwa e1898. Idolobha nendawo yalo yedolobha elikhulu kwakha isango likaNdunankulu lokufudukela kwabantu eMelika ngokusemthethweni. Kukhulunywa izilimi eziningi ze-800 eNew York, okwenza kube idolobha elihluke kakhulu ezilimini emhlabeni. INew York City iyikhaya lezakhamizi ezingaphezu kwezigidi ezingama-3.2 ezizalelwe ngaphandle kwe-United States, okuyisibalo esikhulu kunazo zonke ezizalelwa kwamanye amazwe kunoma yiliphi idolobha emhlabeni. E-2017, indawo yedolobha laseNew York ikhiqize umkhiqizo omkhulu we-metropolitan (GMP) we-US $ 1.73 trillion. Ukube i-New York City enkulu ibiyizwe elizimele, ibizoba ne-12th ephezulu kakhulu i-GDP emhlabeni. INew York iyikhaya lesibalo esikhulu kakhulu sosigidi samabhiliyoni anoma yiliphi idolobha emhlabeni.INew York City ilandelela imvelaphi yayo eposini yokuhweba eyasungulwa ngabaphathi bamakoloni baseDenmark Republic e1624 eLower Manhattan; okuthunyelwe kwaqanjwa igama elithi New Amsterdam e1626. Leli dolobha nezindawo ezizungezile laba ngaphansi kokulawulwa kwamaNgisi e1664 futhi laqanjwa kabusha ngokuthi yiNew York ngemuva kokuthi Inkosi uCharles II yaseNgilandi inikeze umhlaba umfowabo, uMbusi wase York. INew York ibisebenza njengenhloko-dolobha yase-United States kusuka e1785 kuze kube yi1790. Kube yidolobha elikhulu kunawo wonke ezweni kusukela i1790. I-Statue of Liberty ibingelele izigidi zabokufika njengoba beza e-US ngomkhumbi ngasekupheleni kwe-19th nasekuqaleni kwekhulu le-20th futhi kuwuphawu lwamazwe ase-US nemibono yayo yenkululeko nokuthula. Ekhulwini le-21st, iNew York iye yavela njengendawo yokuqamba nobusomabhizinisi emhlabeni wonke, ukubekezelelana komphakathi, kanye nokusimama kwemvelo, futhi njengophawu lwenkululeko nokwehlukahlukana kwamasiko. E-2019, eNew York kwavotwa idolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni ngenhlolovo yabantu abangaphezu kwama-30,000 abavela emadolobheni ase48 emhlabeni jikelele, becaphuna ukwehlukahlukana kwamasiko aleli dolobha.Izifunda eziningi nezindawo ezakhiwe eNew York City ziyaziwa, nedolobha elineziqu ezintathu izindawo ezivakashelwa izivakashi eziyishumi emhlabeni wonke ezivakashelwa kakhulu e2013 futhi zithola irekhodi lezivakashi ze-62.8 ezigidini ezi-2017. Imithombo eminingana ibeke iNew York idolobha elithathwe izithombe kunazo zonke emhlabeni. I-Times Square, njengesithonjana njenge "nhliziyo" yomhlaba kanye ne "Crossroads" yayo, iyisizinda esikhanyiselwe kahle saseBroadway Theatre District, esinye sezindawo ezihamba phambili zokuhamba ngezinyawo kwabahamba ngezinyawo emhlabeni, kanye nesikhungo esikhulu somkhakha wokuzijabulisa emhlabeni. Amagama wezimpawu eziningi zedolobha, ama-skyscrapers, namapaki ayaziwa emhlabeni wonke. Imakethe yempahla yaseManhattan iphakathi kokubiza kakhulu emhlabeni. INew York iyikhaya lesizwe esikhulu sama China esingaphandle kwe-Asia, esinamaChinatown amaningi asayina kulo lonke idolobha. Inikeza insizakalo eqhubekayo ye-24 / 7, i-New York City Subway iyisistimu enkulu yezokuhamba esisheshayo esisheshayo emhlabeni wonke, eneziteshi zesitimela ze-472. Amakolishi nama-120 angaphezu kwama-XNUMX atholakala eNew York City, kufaka phakathi iColumbia University, iNew York University, kanye neRockefeller University, ebalwe phakathi kwamayunivesithi aphezulu emhlabeni. Isungulwe yiWall Street esifundeni sezezimali saseLower Manhattan, eNew York ibizwa ngokuthi yidolobha elinamandla kakhulu kwezomnotho kanye nesikhungo sezimali esihamba phambili emhlabeni, futhi leli dolobha liyikhaya lokuthengiswa kwamasheya amakhulu amabili omhlaba ngokwakhiwa kwemakethe okuphelele, INew York Stock Exchange ne-NASDAQ.
I-United States of America (USA), eyaziwa kakhulu ngokuthi iMelika (US) noma i-US) noma iMelika, izwe elihlanganisa izifundazwe ze-50, isifunda sombuso, izindawo ezinhlanu ezizibusayo ezinkulu, kanye nezimpahla ezahlukahlukene. Kumakhilomitha-skwele we-3.8 million (9.8 million km2), i-United States iyizwe lesithathu noma lesine ngobukhulu emhlabeni ngobuningi bendawo futhi incane kakhulu kunezwekazi lonke lama-3.9 amamayela skwele ayizigidi (10.1 million km2). Njengoba kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-327, i-US izwe lesithathu elinabantu abaningi. Inhlokodolobha yiWashington, DC, futhi idolobha elikhulu kunawo wonke labantu liNew York City. Amazwe angamashumi amane nesishiyagalombili kanye nesifunda senhloko-dolobha sihlangene eNyakatho Melika phakathi kweCanada neMexico. Izwe lase-Alaska lisenyakatho nentshonalanga yeNyakatho Melika, linqunyelwe yiCanada empumalanga nangaphesheya kweBering Strait kusuka eRussia kuya entshonalanga. Izwe laseHawaii liyisiqhingi esiphakathi nePacific Ocean. I-US izindawo zihlakazekile mayelana noLwandlekazi iPacific nolwandle lweCaribbean, olunwebeka izindawo eziyisishiyagalolunye ezisemthethweni. I-geography ehlukene ngokweqile, isimo sezulu, kanye nezilwane zasendle zaseMelika zenza elinye lamazwe omhlaba we-17 megadiverse.Amazwe ama-Paleo-amaNdiya asuka eSiberia aya ezweni laseNyakatho Melika okungenani i-12,000 edlule. Ikoloni yaseYurophu yaqala ngekhulu le-16th. Izwe laseMelika lavela emikhakheni eyishumi nantathu yaseBrithani eyasungulwa ogwini lwaseMpumalanga. Ngemuva kweMpi yaseFrance neyaseNdiya, izingxabano eziningi phakathi kweGreat Britain kanye namakoloni kwaholela ekuvukelweni kweMelika e-1775, kanye neSimemezelo Sokuzimela esalandela e-1776. Impi iphela ngo-1783 ne-United States yaba izwe lokuqala ukuthola inkululeko embusweni waseYurophu. Umthethosisekelo wamanje wamukelwa e-1788, kanye nezichibiyelo zokuqala eziyishumi, zaqanjwa zonke ngokuthi uMthethosivivinywa Wamalungelo, zivunyelaniswa ku-1791 ukuze kuqinisekiswe inkululeko enkulu yomphakathi. Izwe laseMelika laqala ukwanda okunamandla kulo lonke elaseNyakatho Melika kuyo yonke le nkulungwane ye-19th, lathola izindawo ezintsha, laxosha izizwe zoMdabu baseMelika, futhi kancane kancane lavuma amazwe amasha laze lahlukanisa izwekazi i-1848.Ngxenyeni yesibili yekhulu le-19th, iMpi Yombango kwaholela ekuqothulweni kobugqila. Ekupheleni kwalelikhulu leminyaka, i-United States yayisingene olwandle iPacific, futhi umnotho wayo, oqhutshwa yingxenye enkulu yi-Industrial Revolution, waqala ukukhuphuka. Impi yaseSpain neyaseMelika neMpi Yezwe I yaqinisekisa isimo sezwe njengempi yezempi yomhlaba. Izwe laseMelika lavela eMpini Yezwe II njengamandla amakhulu omhlaba, izwe lokuqala ukuthuthukisa izikhali zenuzi, okuwukuphela kwezwe elizisebenzisa ezimpini, kanye nelungu elihlala njalo loMkhandlu Wezokuphepha weNhlangano Yezizwe. Umthetho osabekayo wamalungelo abantu, ikakhulukazi umthetho wamalungelo abantu wase-1964, umthetho wamalungelo wokuvota we-1965 kanye nomthetho we-Fair Housing Act ka1968, ukugwemile ukubandlulula okusekelwe kubuhlanga noma umbala. Ngesikhathi sempi ebandayo, i-United States neSoviet Union bancintisana ku-Space Race, baqeda nge-1969 US Ukufika kwenyanga. Ukuphela kweMpi Yomshoshaphansi nokuqothuka kweSoviet Union e1991 kushiye i-United States ingukuphela kwamandla amakhulu.I-United States yiyona nhlangano endala kunazo zonke emhlabeni eyasinda emhlabeni. Kuyipolitiki yenhlangano kanye nentando yeningi emele. Izwe laseMelika lilungu elisungula i-United Nations, i-World Bank, i-International Monetary Fund, i-Organisation of American States (OAS) nezinye izinhlangano zomhlaba jikelele. I-United States iyizwe elithuthuke kakhulu, elinomnotho omkhulu kunayo yonke nge-GDP nomnotho wesibili ngobukhulu yi-PPP, ibala cishe ikota ye-GDP yomhlaba. I-US Umnotho ikakhulukazi ngemuva kwezimboni, ubonakala ngokuvelela kwemisebenzi nemisebenzi esekwe olwazini, yize imboni yezokukhiqiza ihlala ingeyesibili ngobukhulu emhlabeni. I-United States ingumngenisi omkhulu kunayo yonke emhlabeni kanye nomthengisi wesibili ngobukhulu wezimpahla, ngenani. Yize inani labantu bakhona lingama-4.3% kuphela omhlaba, i-US iphethe i-31% yengcebo ephelele emhlabeni, isabelo esikhulu kunazo zonke somnotho ogcwele ezweni elilodwa.Ngenxa yokungafani kwemali engenayo kanye nokungafani kwengcebo, i-United States iyaqhubeka nokuphezulu kakhulu ngezindlela zokusebenza kwezenhlalo, kufaka phakathi isilinganiso somholo, ukuthuthukiswa komuntu, nge-capita GDP ngayinye, kanye nokukhiqiza kwabasebenzi. Izwe laseMelika lingamandla aphambili ezempi emhlabeni, lenza ingxenye yesithathu yokusetshenziswa kwemali kwezempi emhlabeni wonke, futhi liyibutho eliphambili lezepolitiki, elezamasiko nezesayensi emhlabeni jikelele.